May Nyane: 2009
၂၀၀၉နဲ့အတူ ဒုက္ခအားလုံး ကုန်ဆုံးကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး
နှစ်သစ်၂၀၁၀ မှာ.. ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေ...။
at December 31, 2009 24 comments:
at December 27, 20097comments:
"နှောင်ကြိုးအဖြည်"လို ၀တ္ထုမျိုးရေးခဲ့သလို ခု "ချစ်ခြင်းအချည်" လို ၀တ္ထုမျိုးလည်း ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရတခုက ၁၉၈၉ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ဒီဝတ္ထု ပါခဲ့ပြီး နောက် သုံးလေးလလောက်ကြာတော့ ဒီဝတ္ထုထဲက ဇာတ်ကောင်နာမည်ပဲ ပြောင်းပြီး ကူးချထားတဲ့ ၀တ္ထုတိုတပုဒ် တခြားမဂ္ဂဇင်းကြီးတစောင်မှာ အမျိုးသမီး စာရေးဆရာမ နာမည်နဲ့ပဲ ပါခဲ့လို့ ကျမ အင်တာဗျူးတခုမှာ ဖြေရှင်းခဲ့ရဖူးပါတယ်။
တကယ်တော့ အဲဒီတုန်းက မေငြိမ်းဆိုတာလည်း ကလောင်ပေါက်စလေးပါ..။
at December 25, 20099comments:
သားကြီး တနှစ်သားကျော်ကျော်လောက်..။ ဘ၀မှာ အချစ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တုန်တုန်လှုပ်လှုပ် ၀မ်းပမ်းတနည်းတွေ ခံစားရတဲ့အချိန်တချိန် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ထားပါတော့လေ.. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေ..။ ပြောပြချင်တာက.. စာရေးဆရာဆိုတော့လည်း စိတ်ထိခိုက်စရာ အချစ်ဘ၀ကို ကြုံရချိန်မှာတောင်မှပဲ "တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ရင် လူတွေဟာ ချစ်စ ခင်စမှာသာ ခံစားလို့ အချိုမြိန်ဆုံးအချိန်ကို ရတာပါလား" လို့ တွေးမိပြီး... လူတိုင်း ဒီလို ရှိမှာပဲဆိုပြီး တွေးမိတဲ့ အတွေးလေးကို ၀တ္ထုလေးလို ချရေးဖြစ်ခဲ့ တာပါပဲ..။ ပြောရရင် စိတ်ကျဉ်းကျပ်စရာ ဘ၀တခုကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ရေးဖြစ်တဲ့ စာရိုးရိုးလေးပါပဲ..။ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်းမှာ ပါခဲ့တာပါ..။ နုစဉ်ဘ၀က လက်ရာလေးပေါ့..။
at December 18, 2009 14 comments:
၁၉၉၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလထုတ် ရင်ခုန်ပွင့် မဂ္ဂဇင်းထဲက ၀တ္ထုရှည် စ-ဆုံး ပါ။
at December 11, 20096comments:
၁၉၉၀နှစ်ထဲ... အိမ်ထောင်သက် ၃နှစ်ကြာခဲ့ပေမဲ့ ရင်သွေးယူဖို့ စိတ်မကူးရဲသေးဘဲ ရှိနေခဲ့တာ..။ ဒီလိုနဲ့ တချိန်များ ရင်သွေးယူမယ်လို့ စဉ်းစားချိန်ကျ... ရမှ ရပါ့မလားလို့ တွေးမိတုန်း ရေးဖြစ်တဲ့ ၀တ္ထုပါ။ ကလျာမဂ္ဂဇင်းကို ပေးတော့ မမ၀င်း(ကလျာ- ၀ိဇ္ဖာ သိပ္ပံ)က သဘောကျလို့ဆိုပြီး ပန်းချီ စံတိုးကို Illustration အပ်ပေးတာ။ သရုပ်ဖော်ပုံက ၀တ္ထုထက်ပိုကောင်းတယ် ထင်တာပဲ..။ အဲဒီပုံလေး ကြိုက်လွန်းလို့ သေချာသိမ်းထားတဲ့ ကြားကပဲ ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၀တ္ထုလေး ပါခဲ့တာက ၁၉၉၀ ဇွန်လထုတ် ကလျာ မဂ္ဂဇင်းမှာပါ..။
at November 29, 20099comments:
နိုဝင်ဘာ ၂၀ရက်နေ့ Los Angeles ကို ရောက်ပါမယ်..။ မိုးချိုသင်းတို့ အိမ်မှာ နေထိုင်ပြီးသကာလ ၅ရက်လောက် မနားတမ်း အာလူးဖုတ်ပါမယ်..။ ဘလော့ဂါ များလည်း ဆုံကြပါဦးမယ်..။ အရှင်သခင် ဘလော့ဂါ ကိုဇာနည် ကလည်း အပြေးလာရောက်ပြီး ပါဝင်ဆင်နွှဲမှာပါတဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီဝန်းကျင် ရှိရှိသမျှ သဟာယများနဲ့ တွေ့ချင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်.. Hollywood က စယ်လီဘရစ်တီင်္များရဲ့ appointment တွေကိုတောင် လက်ခံမထားပါ :P ကိုယ့်အချင်းချင်းတွေကို ဦးစားပေးပါမယ်..။ မိုးချိုသင်းဆီမှာ Book လုပ်နိုင်ပါတယ်.. (ချိုသင်းတော့ မျက်ခမ်းလှုပ်နေလောက်ပြီ :D) ... ။ တွေ့ကြသေးတာပေါ့ နော ... :)
at November 17, 2009 18 comments:
ဒီဝတ္ထုလေးက ၁၉၈၉ သြဂုတ်လ ပေဖူးလွှာ မဂ္ဂဇင်းမှာ ပါခဲ့တာပါ။ ကျမရေးဖို့ စိတ်ကူးလေ့မရှိတဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးပါ။ ဗမာရုပ်ရှင် ၀တ္ထုတွေထဲ အိမ်အကူအလုပ်သမားတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ခွဲခြားမှုတခုခုနဲ့ ဖော်ပြလေ့ရှိတာ..။ အဲလိုပဲ အိမ်ရှင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း အဆိုးမြင် များတာတွေ တွေ့ရတာကို ကျမ သဘောမကျပါဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ မေတ္တာတရားဆိုတဲ့ ကိစ္စကို တွေးမိပြီး ဒီဝတ္ထုလေးကို ရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီဝတ္ထုလေးကိုလည်း ဆရာအောင်သင်းက အကြိုက်ဆုံးဝတ္ထုအဖြစ် ရွေးခဲ့ပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျမစိတ်ထဲ ကိုယ့်ဘာသာ ရေးပြီး သဘောတကျကျ ဖြစ်နေရတဲ့ ၀တ္ထုထဲမှာ ဒီဝတ္ထု မပါပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆရာအောင်သင်းရွေးတော့ ကျိတ်ပြီး ကြည်နူးနေရတာပေါ့။ (တခါတလေတော့လည်း ကိုယ့်ဘာသာရေးပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ကြိုက်လှချည့်ဖြစ်နေပေမဲ့ စာဖတ်သူတွေဘက်က ထူးထူးခြားခြားမဖြစ်တဲ့ အပုဒ်တွေလည်း ရှိပါသေး။)
at November 10, 20099comments:
စာမရေးချင် (၀တ္ထု ကဗျာကို ဆိုလိုတာပါ) ဖြစ်နေတာ တော်တော်ကို ကြာပါပြီ။ ပြီးတော့ ဒီတလောမှာ ကိုယ့်ဝတ္ထု အဟောင်းလေးတွေ ထုတ်ထုတ်ဖတ်နေမိတယ်။ ဖတ်မိပြီးတော့လည်း ငါ ဒီတုန်းက ဒီလို ရေးခဲ့ပါလားလို့ ပြုံးမိရ.. မျက်မှောင်ကြုံ့မိရ..။ ဘာလို့ ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးတွေ ဆက်စပ်တွေးမိရပေါ့။ ကျမ စာတော်တော်ရေးဖြစ်တဲ့ အချိန်တွေတုန်းက တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆရာအောင်သင်းက လစဉ်ထုတ်မဂ္ဂဇင်းတွေ ထဲကနေ သူ့အကြိုက် ရွေးတဲ့ ၀တ္ထုတွေကို သုံးသပ်ပြီး"အောင်သင်းအကြိုက်ဆုံးဝတ္ထုတိုများ"ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍ သဘင်မဂ္ဂဇင်းမှာ လစဉ် ရေးနေတဲ့အချိန်။ ကျမက ဆရာ အောင်သင်းရဲ့ စာပေရေးရာဆောင်းပါးများ စာအုပ်ကို ကြိုက်လွန်းလို့ ခေါင်းအုံးအိပ်တဲ့သူဆိုတော့ တလတလ ဆရာ ဘယ်ဝတ္ထု ညွှန်းပါလိမ့်လို့ စောင့်ဖတ်နေရတဲ့အချိန်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆရာက ကျမ ၀တ္ထုတိုလေးတွေကို လေး ငါးကြိမ် အကြိုက်ဆုံးအဖြစ် ရွေးဖူးပါတယ်။ အဲဒီလ တွေဆို ကျမမှာ ပျော်လို့။ တချို့ဝတ္ထုတွေဆို ကိုယ်တောင် ရွေးမယ်လို့ ထင်မထားတာလေ။ ဆရာက ဘာလို့ ရွေးရတယ် ဆိုတာကိုပါ သေချာ ရှင်းပြတာဆိုတော့ ကျမဖြင့် သဘောတွေကျလို့ပေါ့။
ခုတင်ပေးထားတဲ့ ဝတ္ထုလေးကိုလည်း ဆရာက ရွေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီဝတ္ထုလေးက ၁၉၉၀ ဇွန်လထုတ် ပေဖူးလွှာ မဂ္ဂဇင်း ထဲမှာ ပါခဲ့တာပါ။ ဒီဝတ္ထုလေး ရေးမိတဲ့အကြောင်း ပြောရရင် ကျမ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြိုက်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်တအုပ်ရှိပါတယ်။ စာရေးဆရာ နန္ဒရေးတဲ့ "မျိုသိပ်စိတ်"ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါ။ စိတ်ရောဂါရှိတဲ့ မေခင်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းကို အခြေခံပြီး ရေးထားတာပါ။ အဲဒီ ၁၉၉၀ တလောမှာ မျိုသိပ်စိတ်ထဲက မေခင်ကို သွာသွားပြီး သတိရစေတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်ကို တွေ့ပါတယ်။ (တကယ်တမ်းကြီး တူလှတာတော့လည်း မဟုတ်ပါ) ပြောရရင် သူ့ဆီကနေ ရတဲ့ Inspiration နဲ့ ကျမ ဒီဝတ္ထုကို ရေးဖြစ်တာပါ။ ဆရာအောင်သင်းက ဇူလိုင်လထုတ် သဘင်မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အကြိုက်ဆုံးဝတ္ထုတိုကဏ္ဍမှာ ရွေးခဲ့ပါတယ်။
ခုပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ ကျမဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးကို သနားပြီး အားနာနေမိသလိုလို.........။
at November 08, 2009 14 comments:
အဲဒီ ၁၉၉၅တုန်းက တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အင်တာဗျူးတွေအများကြီး လုပ်ဖြစ်တာ.. ခု ပြန်ကြည့်မှပဲ ကိုယ့်ဘာသာလည်း ပြန်သတိထားမိတယ်။ အဲဒီတ၀ိုက် စာလည်း အများကြီး ရေးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ခုတင်ပေးထားတဲ့ အင်တာဗျူးက ၁၉၉၅ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် မဟေသီမဂ္ဂဇင်းမှာ စာရေးဆရာမ ခက်မာ က 'နဒီ'ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးပါ။ အဲဒီထဲမှာ 'အမျိုးသမီးတယောက် အနေနဲ့ မီးဖိုချောင်အလုပ်ကို အရည်အချင်းတခုလို့ မြင်လား'ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် ကျမရဲ့ အဖြေက်ို Feminist တချို့က မကျေမလည် ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ကျမရဲ့ တကယ့် လက်ခံမှုပါ..။ အမှတ်တရပေါ့..။ (ပြောရရင်.. စာရွက်လေးတွေ သိမ်းထားတာ ကြာတော့ နွမ်းပြီး ပျက်စီးချင်နေပြီမို့ record လုပ်ချင်တာကြောင့် scan လုပ်ရင်းသားကနေ တင်ပေးလိုက်တာပါ)။
ကမ္ဘာပျက်မယ်လား.. (ဖွဟဲ့.. လွဲစေ.. ဖယ်စေ..)
ညီမလေး အိန္ဒြာက ပြောတယ်..။ တကယ်လို့ကမ္ဘာပျက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့...ဆိုပါစို့…တဲ့။
တကယ်တော့ ကမ္ဘာပျက်တယ်လို့ ထင်ရလောက်တဲ့ ခံစားမှုတွေ ဘ၀မှာ အကြိမ်ကြိမ် ခံစားခဲ့ရဖူးပေမဲ့..။ တကယ့် ရုပ်လောကကြီးပျက်တာကို ကြုံရရင်.. လို့ တွေးလိုက်တော့လည်း စိတ်ထဲ ထိထိခိုက်ခိုက် ဖြစ်လာရပြန်တာပါပဲ။ အဲဒီအခါ ကျမဘ၀ထဲက ထူးခြားတာတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်တာတွေကို ပြန်ပြောပြချင်လာပါတယ်။ (အိန္ဒြာ့ post လိုပဲ အပိုင်းတစ်-နှစ် ခွဲဖတ်ကြပါကုန်…)
ကျမမှာ ထူးခြားတာ တခုရှိပါတယ်။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မကြာခဏ(အကြိမ်ကြိမ်) မက်တတ်တဲ့ အိပ်မက် ၃ခုရှိပါတယ်။ ပထမဆုံးတခုက.. အိပ်မက်ထဲမှာ နေရောင်ထိန်လင်းနေတဲ့ ရွာလို နေရာလေးမှာ အိမ်ရှေ့ ကွက်လပ်လေးတခု။ အဲဒီနောက်က အိမ်လေးက ခြေတံရှည်။ လှေကားရင်းမှာ ကလေးစီး မိန်းမစီး ဖိနပ်ပါး အ၀ါလေးတရံနဲ့ ပန်းရောင်လေးတရံ ယှဉ်လျက်လေး ရှိနေတယ်။ အိမ်ဝင်းထောင့်က မြေပြန့်ုပြန့်မှာတော့ အဖွားအိုတယောက်က စကောနဲ့ ဆန်ပျာနေတယ်။ ဒါပဲ..။ အဲဒီမြင်ကွင်းလေးကို ကလေးဘ၀ သိတတ်စကတည်းက ကျမ မကြာခဏ မက်တယ်။
နောက်တော့ ကျမ အသက် အစိတ်ကျော်မှာ ၀တ္ထုရေးဖို့အတွက်လိုလို့ သွားကြည့်ဖိ်ု့ သန်လျင်ဘက်ကို အစ်မတယောက် လိုက်ပို့လို့ ရောက်တယ်။ အဲဒီတုန်းက သီတာသဘောင်္ကြီးနဲ့..။ သန်လျင်ဘက်ကမ်းရောက်တော့ ကျမတို့ လျှောက်သွားရင်းနဲ့ မွေ့နွန်းကုန်းကို ရောက်ပါရော။ အဲဒီမှာ ဇာတ်လမ်းစတာပါပဲ။ အဲဒီနေရာတွေကို ကျမ သိနေတာပါ။ (ကျမ ကြီးမှ သန်လျင်ကို တခါမှ မရောက်ဖူးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျမအဖေနဲ့ အမေ အိမ်ထောင်ဦး .. ကျမကို ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်ကတော့ သန်လျင်မှာ နေခဲ့တာပါ)။ အစ်မရဲ့ ဦးဆောင်မှုနောက် လိုက်လာတဲ့ ကျမက အဲဒီနေရာတွေမှာတော့ ကျမက ရှေ့က သွားနေမိပါတယ်။ နောက်တော့ ကျမ စိတ်ထဲ သိပ်သွားချင်နေတဲ့ နေရာတွေကို ခြေဦးတည့်ရာနောက် လျှောက်လိုက်သလို သွားနေမိပါတယ်။ ကျမ လမ်းတလမ်းထဲ ချိုးဝင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ လမ်းနာမည်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ မြို့ဟောင်း ၁ လမ်းတဲ့။
အဲဒီလမ်းထဲက နောက်ထပ်လမ်းသွယ်တခုထဲ ကျမ အလိုလို ချိုးဝင်မိပြန်ပါတယ်။ မြရာပင် ၁ လမ်းတဲ့။ အဲဒီလမ်းထဲ အိမ်စုတ်ကလေးတွေ အစီအရီ..။ လမ်းအဆုံးထိ ကျမလျှောက်ဝင်သွားမိပါတယ်။ လမ်းအဆုံးမှာတော့ တကယ်ပဲ မြရာတောကလေးလိုဖြစ်နေတဲ့ သစ်ပင်စုစုလေးတွေက ပိတ်သွားပါတယ်။ အဲဒီလမ်းကလေးအဆုံး ဘယ်ဘက်ခြမ်းက ယိုင်နဲ့နဲ့ အ်ိမ်ကလေးတလုံးကို ကျမ ရပ်ကြည့်နေမိပါတယ်။ ဖတ်လာတဲ့သူတွေ ရိပ်မိမှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒါ ကျမ အိပ်မက်ထဲက အိမ်လေးပါပဲ။ ဘိနပ်လေး နှစ်ရံနဲ့ အဖွားကြီးတော့ ရှိမနေပါဘူး။
အဲဒါကို နောက်မှ အမေ့ကို ပြောပြတော့ အမေက သိပ်ကို အံ့သြနေပါတယ်။ အမေတို့ အိမ်ထောင်ဦးတုန်းက အဲဒီအိမ်လေးမှာ ငှားနေခဲ့ကြတာဆိုတာကို ကျမကို အမေတို့ တခါမှပြောမပြခဲ့ဖူးပါဘူး..။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ဘာလို့မှန်းမသိပါဘူး.. ကျမ အဲဒီအိပ်မက် ထပ်မမက်တော့ပါဘူး။
နောက်ထပ် အဲလိုပဲ မကြာခဏ မက်တတ်တဲ့ အိပ်မက်တခုကတော့ ကျမက ၀ါးရုံပင်တွေ ဘေးဘယ်ညာမှာ ကိုင်းကျပြီး အုပ်မိုးထားတဲ့ တောင်ကုန်းမို့လေးတွေကြားက တောလမ်းလေးတခုထဲမှာ အေးအေးလူလူ လျှောက်နေတာ။ ကျမကိုယ်မှာ ချွေးလေးတွေနဲ့ အေးလို့..။ ဒါပဲ အိပ်မက်က..။ ကျမ ၁၀တန်းနှစ်မှာ ပထမဆုံး ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူး သွားရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက တောလမ်းကနေ တက်ရတာမို့ သိပ်ပျော်တာပါပဲ..။ ဒီလိုနဲ့ ရွှေရင်ဆို့အကျော် တနေရာအရောက်မှာတော့ ကျမအိပ်မက်ထဲက မြင်ကွင်းနဲ့ တန်းကနဲ တိုးပါတော့တယ်။ အဲဒီနေရာလေးမှာ လမ်းလျှောက်နေတုန်းမှာလည်း တကယ်ပဲ ကျမကိုယ်မှာ ချွေးတွေအေးလို့။ အဲဒီလမ်းကလေး လျှောက်နေတုန်းမှာလည်း အိပ်မက်ကို တချိန်လုံး သတိရနေခဲ့ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီည တောင်ပေါ်ရောက်တော့ ကျမ အပြင်းဖျားပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်း အဲဒီအိပ်မက် တခါမှ ထပ်မမက်တော့ပါဘူး။ ပြီးတော့ အဲဒီနောက် နှစ်တိုင်းနီးပါး ကျမ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူး နှစ်စဉ်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး အိပ်မက်ကတော့ ခပ်ငယ်ငယ်ကတည်းက မက်တာပေမဲ့ နောက်ဆုံးမက်ခဲ့တာ ၂နှစ်လောက် ရှိပါပြီ။ ခုချိန်ထိဆိုရင် လေးငါးခါတော့ မက်ပြီးသားပါ။ အဲဒီအိပ်မက် စမက်စဉ်ကအတိုင်းပြောပြရရင် အိပ်မက်ထဲမှာ ညဘက်ကြီး။ ကျမက ရေထဲမှာ မှောက်ခုန်ကြီး မျောနေတာ..။ အဲဒီငယ်ငယ်လေးမှာ မက်ကတည်းက အိပ်မက်ထဲမှာ ကျမက အသက်ကြီးနေပြီ်။ ကျမ ခေါင်းထောင်ကြည့်တော့ ကျမနားမှာ ရုပ်တုတွေ.. အဆောက်ဦးတွေက ရေနစ်လက်စ တပိုင်းတစပေါ်လို့။ ဒါပါပဲ အိပ်မက်က..။ (အပြင်မှာဆိုရင်တော့ မဖြစ်နိုင်.. ကျမက ရေမကူးတတ်တော့ ချက်ချင်း ပလုံဆို သွားမှာ..) နောက် နည်းနည်းကြီးလာမှ အဲဒီရုပ်တုတွေထဲမှာ တခုက New York က Liberty ရုပ်ကြီးလို့ သိလာတယ်။ နောက်တော့ အဆောက်အဦးကလည်း ၀ါရှင်တန်က ပါလီမန်အဆောက်အဦးရဲ့ ခေါင်မိုးလုံးလုံးကြီးမှန်း သိလာတယ်။ (ကဲ.. ဇာတ်လမ်းကတော့ စလာပါပြီ..။ ခု ကျမနေတာ ၀ါရှင်တန် နား..။ ကျမရုံးကလည်း လွှတ်တော်ရှေ့မှာ..။ လစ်ဘာတီရုပ်ကြီးနဲ့တော့ ဝေးပါတယ်။ :P) ကဲ.. ကမ္ဘာကြီးကတော့ ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၁မှာ ပျက်မှာတဲ့။
ကျမမှာလည်း ကြုံကြိုက်စရာ အိပ်မက်ထဲက မြင်ကွင်း ဒါပဲ ကျန်တော့တာ။
ဆိုတော့ ပြောရရင် ကျမစိတ်ထဲ… ယုံသလိုလို..။(ကျောချမ်းစရာ မကောင်းလား.. :D)
အင်း…. "ကမ္ဘာပျက်ခါနီး တစ်လလောက်အလို" တဲ့။
တကယ်တော့ ဘယ်သူတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးမကြီးတော့ပါဘူး။ တကယ်သာဆို အဲဒီအချိန်လေးမှာ ဘာကိုမှ တွေးထား ပြင်ထားလို့မှ မရတာပဲ..။
အဖြစ်ချင်ဆုံးက ဘယ်သူတွေ ဘာမှမဖြစ်ချင် ကိုယ်အရင်ဆုံးသေသွားတာမျိုးပေါ့။
ဟုတ်တယ်..တကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်ပဲ ပြောပြော.. ကိုယ်ပဲ အရင် သေချင်တယ်။
ကျမတို့ မိဘတွေပဲ သေကုန်ပြီး ကလေးတွေချည်း ကျန်နေခဲ့မှာကို ပူတယ်။ မသေရခင်စပ်ကြား အပူအလောင်တွေ အနာတရတွေ ချောက်ချားစရာတွေ တွေ့ရမှာကို တွေးကြောက်နေမိမယ်..။ သေချာတာတော့ ဘုရားစာတွေ ပိုရွတ်နေဖြစ်မယ်။
သားသမီးတွေကို တခုခုဖြစ်ရင် အတူတူပြေးမယ်.. မေမေတယောက် ဖေဖေတယောက် ကပ်ထား။ သားကြီးက ဗလကြီးတော့ ရှေ့က ဦးဆောင်ရမှာပဲဆိုတာတွေ ပြောထားမှာပေါ့။ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ မခွဲမခွာ ရင်ဆိုင်ကြဖို့…။
ဘ၀ထဲ ကြာကြာမနေလိုက်ရမှာကိုပေါ့။ ကျမ စာတွေ ရေးချင်သေးတယ်..။ ပန်းချီလည်း ပြန်ဆွဲချင်သေးတာ..။ ပြီးတော့ အမေ့ကို ပြေးတွေ့လိုက်ချင်သေးတာ။
မသေခင် ခံစားရမယ့် ဝေဒနာနဲ့ သေကွဲ ရှင်ကွဲတွေ အများကြီး ကြုံဦးမှာကိုပေါ့။
ခုချိန်ထိတော့ ကိုယ့်မိသားစုလေးကိုပဲ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်တွယ်ဆောင်ထားချင်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်လောက်ဆိုရင် ရေးနိုင်ရင်တောင် ကျောက်ချပ်လို.. သတ္တုပြားလို.. ပေါ်မှာပဲ ထွင်းရေးဖို့ ကြိုးစားမယ်..။
(ဂ) တွေးမိတွေးရာ အတွေး
တကယ်လို့များ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ငါတယောက်တည်း အသက်ရှင် ကျန်နေခဲ့ရင်.. ဘယ်လို လုပ်ရပါ့..။
အဲဒီအချိန်မှာတော့ ဘာကိုမှ ဂုဏ်မယူချင်တော့ဘူးထင်တယ်။ စိတ်သောကပဲ ဖိစီးနေတော့မှာလေ..။ ကြံဖန် ဂုဏ်ယူရရင်တော့ ခဏပဲ ရတဲ့ လူ့ဘ၀ထဲ တန်အောင် နေခဲ့ရတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် .. အနားမှာ အားရှိဖော် မိသားစု ၅ယောက်တောင် အတူရှိနေတာ..။
(၁၁) ကျူးရင့်ချင်တဲ့ ဥဒါန်း
အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရရင်..ဘာ ကျူးရင့်ရမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး။
(ဟင်… ဟုတ်သေးပါဘူး.. ဒါလည်း )
ဒါမှမဟုတ်လည်း.. ဟေးးးး ငါ့အိပ်မက် မှန်တယ်…. လို့များလား…။ 
at October 28, 2009 37 comments:
သူက ကျမကို မာမီလို့ ခေါ်တယ်..။ သူ့ကို တွေ့ရင် တတွတ်တွတ်နဲ့ ဆုံးမ တတ်လို့တဲ့..။ ကျမကတော့ သူ့ကို ကိုရဲလို့ပဲ ခေါ်ပါတယ်။ ကျမတို့ချင်းက ဝေး.. ဝေး... နေတတ်တော့ တွေ့ရပြီလားဟေ့ဆိုရင် စကားပြောလို့ ကောင်းမယ့် တနေရာရာကို သွားဖြစ်အောင် သွားထိုင်ပြီး တွတ်ထိုးတော့တာ..။ အများအားဖြင့် ပြောဖြစ်တာက ဘ၀အမောတွေ..။ ကျမတို့ တွေ့ရင် မမေ့မလျော့ လုပ်ဖြစ်တာက ကိုရဲကို ကျမက ဗေဒင်တွက်ခိုင်းဖို့နဲ့ ကိုရဲကလည်း မမေ့မလျော့ ကျမ လက္ခဏာကို တောင်းတောင်းကြည့်တတ် တာ..။ (နီကိုရဲက ဗေဒင်ဟောရင် သိပ်မှန်တာ)။ အဲဒီအခါကျရင် ကြားထဲ ရှုပ်တုပ်ရှုပ်တုပ် လုပ်တတ်ကြတာက မင်းခိုက်စိုးစန်..။ ဒါမှမဟုတ်.. ခက်မာ။ ဒါမှမဟုတ် ဝေမှူးသွင်။ ကျမတို့တတွေ တကယ့် မောင်နှမရင်းချာတွေလို. တိုင်ပင်ကြ.. ရင်ဖွင့်ကြ..။ ဘယ်လောက်ဝေးနေနေ ပြန်တွေ့ရင် နွေးထွေးမြဲ..။
(မေငြိမ်း၊ နီကိုရဲ၊ ခက်မာ)
(တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်.. ပြီးခဲ့တဲ့ ကျမတင်ထားတဲ့ ကိုအောင်ဝေးလုပ်တဲ့ အင်တာဗျူး.. မရေးဖြစ်တဲ့ ကဗျာကို ကျမတို့ ၃ယောက် လဆက် ဖြေခဲ့ကြတာ.. ခုတော့ တကယ်ပဲ စိုတဲ့လက်မှ မခြောက်ခင်...)
ကိုရဲ ၀တ္ထုတွေ အောင်မြင်ချိန် ကျောင်းထဲ ရုပ်ရှင်လာရိုက်တဲ့အခါ ကျမကို ဌာနမှာ သူ လာရှာခေါ်သွားပြီး သူ့ရိုက်ကွင်းအနားမှာ လေပွားခဲ့ကြတာ..။ တကယ်က သူနဲ့ ကျမက အသက် ၁နှစ်ခွဲပဲ ကွာတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူက ကျမကို အစ်မကြီးလို.. ကျမက သူ့ကို မောင်ငယ်လို ဆက်ဆံတော့ ကျမတို့က တကယ့် မောင်နှမတွေလို..။
သူနဲ့ နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ကြတာ ၂၀၀၄ နိုဝင်ဘာလထဲ.. ကိုငှက်(ထူးအိမ်သင်)ဆုံးတာ ရက်၁၀၀ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ကို နေမျိုးဆေးက Mr.Guitar မှာ ကိုငှက်မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေချည်းပဲ အမှတ်တရဆိုပြီး လုပ်ပေးတဲ့ပွဲလေးမှာ ကိုငှက် ချစ်တဲ့ ကိုရဲနဲ့ ကျမတို့ သူငယ်ချင်းတတွေ ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြတာ..။ နောက် မင်းခိုက်စိုးစန် ရောပေါ့...။
(နီကိုရဲ၊ ခက်မာ၊ မေငြိမ်း၊ မင်းခိုက်စိုးစန်)
(ကိုရဲအိမ်မှာ.. ထုံးစံအတိုင်း မောင်နှမတတွေ.. တဟားဟားနဲ့ ရယ်ခဲ့ကြရတာ.. အဲဒါ နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့)
ထုံးစံအတိုင်း မောင်နှမတွေ အလုပ်ကိုယ်စီရှုပ်ပြီး မတွေ့တာကြာလို့မို့... စကားတွေ ဖောင်လောင်တိုက် ပြောကြတာ..။ သူက ပြောလိုက်သေးတယ်.. ကိုငှက်သာ ကြည့်နေရင် ကျနော်တို့ကို ကြည့်ပြီး သူ့တော့ မလွမ်းကြဘဲ လေကန်နေကြတယ်လို့ ဆဲနေမှာတဲ့..။ (အဲဒီတုန်းကလည်း ကိုရဲက သူနဲ့ ကိုငှက် ဂျစ်ကျကြပုံတွေ ပြောပြတာမို့ ကျမတို့မှာ ငိုချင်တဲ့ ကြားကပဲ ရယ်နေခဲ့ကြရတာပါ။ (ကိုရဲက ရယ်စရာ ဖြစ်အောင်ကို ပြောတတ်တာပါ။ အဲလိုရယ်စရာတွေသာပြောနေတာ သူ့ရုပ်ကတော့ ခပ်တည်တည် ထားတာမို့ ကျမတို့မှာ ပိုရယ်နေရတာပါ)။ တကယ်တော့ ကျမတို့အားလုံးဟာ ကိုငှက် ဆုံးတုန်းက အသည်းတွေ ကွဲခဲ့ကြတဲ့ သူတွေချည်းပါပဲ..။ ခုတော့ဖြင့်... ကိုငှက်နောက်ကနေ.. တန်းစီသွားကြသူတွေထဲ သူလည်း နံပါတ်စဉ် တခု ချိတ်ခဲ့ပြီ။
ခုလည်း ငါကတော့ ဆူချင်တာပါပဲ...။ မွေးရာပါနှလုံးရောဂါဟာ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ရင် သေဖို့ သိပ်မြန်တယ်ဆိုတာ.. နင်အသိဆုံးလေ.. ကိုရဲ..။
ငါ ပို စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာက ဒီကနေ့ နင့်နာရေးသတင်းကို ငါနဲ့ စိုးလေး ပြောလိုက်ကြရတာပဲ..။ (စိတ်ဆင်းရဲစရာ ကောင်းလိုက်တာ)
ကိုရဲရေ.. ခက်မာလည်း ညက အိပ်မပျော်ဘူးသိလား...။
တကယ်တော့ ငါတို့ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို အမြဲတမ်းပျော်အောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ နင့်မှာ နာကျင်စရာတွေ ရှိသမျှ.. ငါတို့ကကျတော့ နင့်ကို ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါလားနော်...။
အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၉
at October 25, 2009 16 comments:
ကိုအောင်ဝေး လုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူး ( ၁၉၉၅... )
အဲဒီတုန်းကလည်း ၁၉၉၅ပဲ .. (လ မမှတ်မိတော့) နောက်ပိုင်း ကျတယ်ထင်တယ်..။ ဖားအံကနေ ခဏ ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်။ သမ္မတဟိုတယ်မှာ လုပ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကန်တော့ပွဲတခုမှာ ကိုအောင်ဝေးနဲ့ တွေ့တုန်း မြင်ကွင်းစုံဆိုတဲ့ မဂ္ဂဇင်းအတွက်.. အင်တာဗျူး လုပ်ဖြစ်တာ မှတ်မိတယ်။
ခုမှ ကိုယ့်အင်တာဗျူးတွေ ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ ကိုယ့် သဘောထား ခံယူချက် ယုံကြည်မှုတွေက ခုချိန်ထိ မပြောင်းလဲပါလားလို့ သတိထားမိတယ်။ အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရရင် အမြဲတမ်း အရိုးသားဆုံး (ကြိုးစား) ဖြတ်သန်းခဲ့တာတွေအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိပ်ပြာသန့် ကျေနပ်မိပါတယ်..။
at October 23, 2009 8 comments: